आज गहिरो परिचय भोली नचिन्ने हाकिम साहेब ! - Everest Dainik - News from Nepal
आज गहिरो परिचय भोली नचिन्ने हाकिम साहेब !
मः हाकिम साहेब कता हुनुहुन्छ म्याम ?
एक छिन् रोक्नुहोस् है ? क्यान्टेनमा खाना खान जानुभएको छ ।
मः हुन्छ म्याम ।
हाकिम साहेब खाना खानबाट खाएर कार्य कक्षमा आउँदै हुनुहन्छ । उहाँ कुर्सीमा बस्दैहुनुहुन्छ । मैलै आफ्नो नाम बताउँदै हाकिम साहेबलाई नमस्कार टक्राए । उहाँले पनि नमस्ते भन्नुभयो । मैले आफू फलानो ठाउँबाट यस्तो कामले यहाँसम्म आएको भन्दै फेहरिस्त सुनाए । अनि मैले नै कुरो अघि बढाए । अनि सर सन्चै हुनुहुन्छ नि ? हाकिम साहेबले मन्द मुस्कानमा सन्चै छु भन्नुभयो ।
उहाँले पनि कुरा थप्नुभयो– के लग्नुहुन्छ ? चिया वा कफि । मैले भने, सर भर्खरै मैले खाना खाएर आएको । अब कुनै दिन खाउला चिया, कफि ।
हाकिम साहेबले पनि हुन्छ भन्दै टाउको हल्लाउनुभयो । मैले अनौपचारिक कुराबाट नै अगाडी बढौं भन्ने ध्येले अनि सरको घर चाहिँ कता प¥यो ? हाकिम साहेबले अलि मन मारेर मेरो त नजिक परेन भन्नुभयो ! त्यसो भए सरको घर पूर्वतिर नै पर्यो ? हो । यतिमात्रै बोल्नुभयो । पछि आफैले भन्नुभयो–झापाको मेचीनगर नगरपालिका हो । अनि तपाईको भन्दै सोध्नुभयो ? उहाँकै उत्तर दिने शैलीमा मैले पनि मेरो यतै हिउँ पर्ने जिल्लामा पर्यो सर । त्यस पछि उहाँले यो माथि प्रश्न सोध्नुभएन । मैले पनि सोधिन् ।
अब जेकामको लागि आएको थिए त्यहिमा केन्द्रित भए । मैले पश्न सोध्दै गए । उहाँले छोटो–छोटो उत्तर दिदैं जानुभयो । अब मैले काम सकाए । हुन्छ त सर अहिले म लाग्छु ? हाकिम साहेबले भन्नुभयो–बस्नु न बस्नु पत्रकार महोदय ? अलि बढि कुराकानी गरौं । अब चाहिँ अफ दि रेकर्ड कुरा गरौं हैं उहाँले भन्नुभयो । हुन्छ सर मैले भने । उहाँले एकछिन अघि तपाइले मलाई प्रश्न सोध्नुभयो अब म सोध्छु झै ?
तर, क्यामेरा बिना भन्दै मतर्फ प्रश्न तेर्साउनुभयो । मैले हुन्छ नि सर भने । उहाँले पहिलो प्रश्न सोध्नुभयो–कस्तो चल्दै छ त धनगढीको पत्रकारिता ? मैले सानो स्वरमा ठिकै छ सर भने । मलाई पनि क्याम्पस पढ्ने बेलासम्म पत्रकार बन्ने ज्यादै ठूलो हुटहुटी थियो । तर, परिवारको दबाबले मैले त्यो चाहना त्यागे । अघिसम्म प्रश्न सोध्दा पनि छोटो उत्तर फर्काउने हाकिम साहेब अहिले भने आफैले विगतलाई सुनाउनुभयो ।
अनि मैले पश्न गरे किन त्यति चाँडै चाहना त्याग्नु भयो त ? उहाँले भन्नुभयो–अभिभावकले सम्झाए, पत्रकारिता गरे पैसा कमाउँदैनौं, लोकसेवामा पास भए राम्रो जागिर पाउँछौं अनि पैंसा पनि कमाउँछौं परिवारको यो कुरा सुनेर नामभन्दा पनि दाम ठूलो भन्दै लोकसेवा पास भएर जागरि खाएको । मैले ए होर मात्रै भने । हुन्छ सर अहिले लाग्छु ? अब पछिल्लो दिन बसौंला । हाकिम साहेबले पनि हुन्छ भन्दै म आफ्नो अफिस फर्के उहाँ कार्य कक्षमा बसेर आइफोनमा फेसबुक चलाउन व्यस्त हुनुभयो ।
याे पनि पढ्नुस ल्याण्डफिल्ड साइडका लागि जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया अगाडि बढ्यो
अर्को दिन काम विशेषले म त्यहि हाकिम साहेबकै अफिस गए । त्यो दिन उहाँलाई कार्य कक्षमै भेटाए । सर नमस्कार भन्दैं सोफामा बसे । मैले उहाँलाई आफूले चाहेको विषयवस्तुबारे प्रश्न सोधे । तर उहाँको आवाजमा जवाफ त आयो तर अर्कै । उहाँले जवाफमा भन्नुभयो–तपाई कहाँबाट आउनु भएको ? म तिन छक परे ! सर अस्ति गहिरो परिचय नै भएको थियो त । बिर्सीनुभयो ? म उही के पत्रकार महोदय । कुन मिडियाबाट नि भन्दैं उहाँले फेरि पश्न राख्नुभयो । मैले मन मनै सोचे अहकंकारको मात चढ्या रैछ हाकिम साहेबलाई त । नत्र हप्ता दिन अघि निकै गजबसंग परिचय भएको मान्छेले किन यति चाँडै अचम्मले बिर्सिनुभयो त !
धनगढीका अधिकांश सरकारी गैर–सरकारी कार्यालयका प्रमुखको बिर्सीने बानी यस्तै छ । उनीहरु चिने पनि अपरिचित जस्तै बन्छन् । उनीहरु काम भएको दिन मात्रै चिन्छन् । तर, कुनै आफ्नो विशेष काम परेर उनीहरु कहाँ पुग्दा अघिल्लो दिन परिचय भए पनि पछिल्लो दिन फेरि परिचय खोज्छन् ।
तर, कोही कार्यालयका प्रमुख भने बडो आदरकासाथ कुराकानी गर्छन् । तर, यस्ता हाकिम साहेब विरलै भेटिन्छन् । दिनहुँ सेवग्राहीको चाप हुने हामिम साहेबले त बिर्सीनु ठिकै हो । तर, जहाँ कामको खासै चाप हुँदैन त्यहाँका हाकिम साहेबले बिर्सिदा भने नमिठो लाग्छ । हुन त हाकिम साहेबले लोकसेवा पास भएर जागिर खानु भएको हो । तर, कुन्नी आज गहिरो परिचय हुँदा भोली किन बिर्सिन्छन् ।